Ny lafiny Tononkalo ao amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Kambodziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 16:56 GMT
Tononkalo amin'ny teny Kambodziana nosoratan'i Seserak
Bilaogera Kambodziana maro no mizara ny tononkalony ao anaty aterineto. Ity tononkalo etsy ambony ity, izay mitondra ny lohateny hoe Fararano amin'ny teny Malagasy, dia nosoratan'i Seserak, Kambodziana mpianatra any amin'ny anjerimanontolo ao Japana, ary mety miaina fararano hafa kokoa raha oharina amin'ny ao an-tanindrazany. Voadíka amin'ny teny Anglisy ao anatin'ireo fanehoankevitra ity tononkalo ity.
Namoaka tononkalo iray mitondra ny lohateny hoe Famakiana ny Fiainana (pejy voafafa) i Tharum, izay momba ny lanjan'ny famakiana boky. Avy aminà boky mirakitra tononkalo nomenà bilaogera Kambodziana iray hafa, Jinja izay manoratra bilaogy momba ireo haikanto ao an-toerana sy ny sehatry ny literatiora, ny tononkalon'i Tharum.
Matetika manoratra momba ny tononkalo vakiany avy amin'ireo poeta Kambodziana i KhmerOverseas, Kambodziana iray monina ao Texas, ny sasany amin'ireo tononkalo ireo navoaka anatinà gazety ao amin'ny aterineto (rohy maty). Ahitàna fangatahana boky mirakitra tononkalo avy aminà namana sy havana ny lisitry ny entana ho entiny amin'ny fitsidihany manaraka an'i Kambodza.
Afaka mahita karazana famakiana tononkalo Kambodziana maro tsy mila aterineto ireo izay tsy manoratra tononkalo/momba ny tononkalo ao amin'ny bilaoginy, anatin'izany ny tononkalo Soedoà/Kambodziana (rohy maty).